Mpanamboatra sy mpamatsy lohan-doko vita amin'ny filomanosana China Luxury Matte Black | Xinpaez
Matte Black vita-Hahatalanjona ny fandroana ny tananao. Matte mainty vita ny loha mihodina.
LASER-TUNNEL TECHNOLOGY- Ny tsindry ambony dia ahafahana mitsitsy rano 30%.
Filtration indroa- Misy vakana ny sivana kapila, sivana tantanana: landihazo PP, fibre karbaona, otrikaina C
Vokatra namboarina tanteraka. Fitaovana (ABS, PC) sy ny loko azo namboarina
Mitsitsy rano, voasivana
10 / 3,4 santimetatra
Matte Black Hahatalanjona ny fandroana ny tananao. Matte mainty vita ny loha mihodina. Ny fahatapahana mainty matte tonga lafatra tsy tapaka dia azo atao. Namboarin'izy ireo izany mba hahafahanao manadio sy miaro mora foana ny fandroana tanana mainty matte nefa tsy manova ny endriny. Ny vokatra fikarakarana loko mavo Xinpaez rehetra dia noforonina manokana tsy misy silicones, savoka ary mpanenona, izay midika fa tsy hanampy gloss sy hanakorontana ny endrika matte izy ireo. Ny olona te hiteny mora kokoa noho ny famirapiratra, saingy tsy marina izany! Matte loko dia tsy porofo manamarina, mazava ho azy, fa mety tsy hanana olana amin'ny marika fandroana farafaharatsiny farafaharatsiny.
TEKNOLOGIANA LASER-TUNNEL mamonjy tsindry rano mahavariana izay afaka mandondona ny ba kiraro (raha mba nitafy azy tao anaty fandroana ianao), nefa malefaka sy malefaka ary mahafaly ny fikorianany! | Ny Laser Perforated Micro-Jets dia mamorona tonelina mahery izay mamoaka rivotra sy rano mikraoskaika miaraka amina herinaratra sy haingam-pandeha mahatratra 30%.
Sivily Rano anaty trano manome mandroso multi-tsehatra fanivanana rano ho an'ny hoditra sy volo izay toa salama kokoa sy tanora kokoa.
Sivana kapila manadio rano mandro amin'ny alàlan'ny fanakanana ny antsanga sy ny loto.
Sivana HANDLE CARTRIDGE Izy io dia manambatra ny KDF mahery, ny Calcium Sulfite ary ny Carbon Active hanala ny firaka, ny chlore, ny pestisides ary ny metaly mavesatra, hisorohana ny harafesina, ny sokay ary ny fofona, ny rano manalefaka ary hanatsara ny fifandanjan'ny PH.
AROMA VITAMIN C ny sivana rano dia azo apetraka ho toy ny sivana tantanana, izay misy vitamina C mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny volo sy ny hoditra mahasalama.
Previous: Loha-pahefana ambony fandroana- nopetahany Chrome
Manaraka: Loha-pahefana mandro tanana mitsitsy rano
lohany fandroana tànana tsara indrindra
lohan'ny fandroana tànana
loha mandro mitady rano mafy
loha loha amin'ny vakana